Ngano dzeSeville, kubva pakatangira migwagwa yayo kusvika kuna Pedro el Cruel | Kufamba Nhau
Luis Martinez | | tsika nemagariro, Sevilla
Seville inzvimbo yakanaka kune vanoda tsika, kuwedzera kune asingagumi zvirongwa zvaunogona kuita muguta, nyaya dzadzo nengano zvakawandisa sezvo zviri zvakanaka uye zvinoshamisa. Ziva kuti kwayakatangira inodzokera kumberi kuguta reRoma re Hispalis Yakagadzwa na Julius Caesar muzana ramakore rekutanga BC.
Sokunge izvo zvaive zvisina kukwana, guta reAndalusia rakanakidzwa nesimba rakakura munguva dze medieval, parakagarwazve nevanhu vatongi veCastilian mushure mekukundwa zvakare Ferdinand III Musande muna 1248. Uye zvakatonyanya kudaro munguva ye Austrias, payakava chiteshi chekutanga chekutengesa neNyika Itsva uye muzinda wezvehupfumi hweSpain empire. Nhoroondo yakapfuma yakadaro yaitofanira kupa kumuka kune dzakawanda ngano nyaya. Naizvozvo, kana iwe uchida kuziva iyo ngano dzeSeville, isu tichaenda kukuudza izvo zvinonyanya kunakidza.
1 Nyaya yaSusona akanaka
2 Doña María Coronel nemafuta ari kuvira
3 Musoro waMambo Pedro I, munhu ane mukurumbira mungano dzeSeville
4 Murume wedombo
5 Nhoroondo yePuppy, yakasarudzika pakati pengano dzeSeville
6 Nhoroondo yeCalle Sierpes
Nyaya yaSusona akanaka
Zvekare zvine chisimba zveguta zvinoonekwa mune ino nyaya iri chikamu chengano dzeSeville. Kudzoka muMiddle Ages, pakanga paine kurwiswa kwechikamu chevaJudha cheSeville uye, mukupindura, maJuda akarangana nemaMoor kuti vatore kutonga kweguta.
Kuti varonge hurongwa, vakasangana pamba pebhangi Diego Susón, uyo mwanasikana wake aive nembiri nerunako rwake munzvimbo yese. Yakadaidzwa Susana Ben Susón uye akange arara pachivande nemumwe mukomana wechidiki wechiKristu.
Sezvo rangano yakanga yarongedzerwa pamba pake, aiziva ega ruoko kuti chii chaizove chinosanganisira. Zano iri raive rekuuraya vakuru vakuru veguta. Uye iye, achitya hupenyu hwemudiwa wake, akaenda kunomuudza zvaive kumusoro. Haana kuziva kuti, nekuita kudaro, anga achiisa panjodzi mhuri yake uye ese Sevillian maJuda.
Muchinda haana kutora nguva kuti ayambire zviremera nezverangano, avo vakaraira kuti vatungamiriri vehurongwa vasungwe, kusanganisira baba vaSusona. Vakaturikwa mazuva mashoma mukati Tablada, nzvimbo yaiurayirwa matsotsi emuguta.
Susona anomiririrwa pane tile mupaki yeMaría Luisa muSeville
Musikana uyu akarambwa nevanhu vake, vaimutora semutengesi, uyezve nemurume waakarara naye. Uye, kubva pano, iyo ngano inopa maviri mavhezheni. Sekureva kwekutanga, akabvunza rubhoti mukuru wekereke kuti abatsirwe, Reginaldo weToledo, uyo akamuregerera ndokupindira zvekuti akazoenda pamudyandigere. Kune rimwe divi, wechipiri anoti aive nevana vaviri nabhishopi uye, mushure mekurambwa naye, akazova mudiwa webhizimusi weSevillian.
Nekudaro, iyo ngano yakabatana zvakare kumagumo. Pakafa Susona, kuda kwake kwakavhurwa. Akati akashuwira izvozvo musoro wake wakadimburwa ndokuiswa pamusuwo wemba yake seuchapupu hwenhamo yake. Iwe uchiri kuona nhasi, kana iwe ukapfuura iyo rufu mugwagwa, Tile ine dehenya imomo ingadai iri imba yaSusona. Muchokwadi, iyo nzira inozivikanwa zvakare nezita remusikana.
Doña María Coronel nemafuta ari kuvira
Iyi ngano kubva kuSeville ine zvakawanda zvigadzirwa zve sipo opera, kunyanya rudo uye chishuwo chekutsiva. Uye zvakare, zvinotitora isu kunguva dzekukundwa kweguta. Mai Maria Coronel Aive musikana wechiCastilian mwanasikana wa Mr. Alfonso Fernández Coronel, aive mutsigiri we Alfonso XI weCastile. Akaroorawo don Juan de la Cerda, uyo akazogunun'una pakati pevadziviriri vemwanakomana wake, Henry II, paakatarisana nemukoma wake wekurera Pedro I yekutevera chigaro.
Nechikonzero ichi, wekupedzisira akauraya Don de la Cerda ndokutora nhumbi dzake dzese, achisiya chirikadzi yake yaparara. Pedro ini ndanga ndisingamuzive iye, asi paakamuona, aive murudo naye. Nekudaro, Doña María Coronel anga asiri kuda kuenderana nemunhu anga araira kuurawa kwemurume wake ndokupinda mumusangano weSevillian we Santa Clara.
Kunyangwe zvakadaro haana kuita kuti Pedro I, anonziwo "Utsinye," kuti arege kuedza kwake kuti ave murongo. Kusvikira rimwe zuva, agutswa neake regal stalker, akapinda mukoniki kicheni uye mafuta akabvira akadirwa kuyambuka kumeso kuisvibisa. Neiyi nzira iye akakwanisa kuita kuti Pedro I amusiye oga.
Musangano weSanta Inés
Akanga achiri kugona kupupurira kufa kwamambo mumaoko ehama yake mukoma Enrique II, uyo akadzosa zvinhu zvakatorwa kubva kuhanzvadzi dzeCoronel nekuramba akatendeka kuchinangwa chavo. Nekudaro, vakadzi vaviri ava vakakwanisa kuwana iyo gungano reSanta Inés mumuzinda waive wababa vake. Wekutanga abbess angave, chaizvo, Doña María Coronel, akafira kuma 1411.
Musoro waMambo Pedro I, munhu ane mukurumbira mungano dzeSeville
Chaizvoizvo ane hutsinye Castilian monarch zvakare nyeredzi mune dzakawanda dzimwe ngano dzeSeville. Semuenzaniso, iyo yatiri kuzokurondedzera kwauri. Pane imwe yenguva dzake dzehusiku achipfuura nemuguta, Pedro akasangana naye Verenga mwanakomana waNiebla, mhuri yakatsigira Henry II, sekukuudza kwatakaita hama yake yekurera. Iwo mapakatwa haana kutora nguva refu kuti abude uye Vane utsinye vakauraya mumwe.
Zvisinei, duel yakamuka chembere kuti akadongorera nemwenje uye, akatya paakaziva mhondi, akadzoka kunozvivharira mumba make, kwete asina kudonhedza rambi raakange akatakura pasi. Iye munyengeri Pedro akavimbisa mhuri yemufi kuti Ndaidambura musoro weane mhosva zvekufa kwake uye kuzviburitsa pachena.
Kuziva kuti akange aonekwa nechembere iyi, akamudana pamberi pake kuti amubvunze kuti tsotsi ndiani. Mukadzi akaisa girazi pamberi pamambo ndokuti "mune mhondi apo." Ipapo, Don Pedro akaraira kuti musoro ugurwe imwe yemifananidzo yemarble kuti vakapa rukudzo kwaari uye kuti akaiswa munzvimbo yemuti. Akarairawo kuti bhokisi risiiwe mumugwagwa mumwechete pakaitika chiitiko chemhirizhonga, asi kuti risavhurwe kusvika parufu rwake.
Kunyangwe nanhasi unogona kuona kuputika mumugwagwa kunonzi, chaizvo, Musoro waMambo Don Pedro. Uye, kuyeuka ichi chinozivikanwa chokwadi, iyo yakatarisana, kwaigara chapupu, inonzi Candil mugwagwa.
Musoro waMambo Don Pedro
Isu tinoenderera muMiddle Ages kutaura nezve iyi imwe ngano yeSeville. Inotaurira kuti, muzana ramakore regumi neshanu, paive tavern in the Akanaka kumeso mumugwagwa, dziri munharaunda ye San Lorenzo, pakamira vanhu vemarudzi ese.
Saka, yaive tsika kuti, seiyo Yakaropafadzwa Sakaramende, vanhu vakapfugama. Apo boka revamwe shamwari pabhawa pavakamunzwa achiuya, vakabuda ndokupfugama sezvo mudungwe waipfuura. Zvese asi imwe chete. Kudanwa Mateo «el Rubio» iye aida kuve protagonist uye, achipomera shamwari dzake dzekuropafadzwa, akataura zvinonzwika kuti haana kupfugama.
Panguva iyoyo chaiyo, a mwari mwari akawira panhamo Mateo anoshandura muviri wake kuva dombo. Kunyangwe nanhasi unogona kuona torso yemurume mune izvo zvinhu zvakapfekedzwa nekufamba kwenguva paBuen Rostro mugwagwa, uyo kubvira ipapo wakadaidzwa, chaizvo, Dombo murume.
Nhoroondo yePuppy, yakasarudzika pakati pengano dzeSeville
Kana iwe watove wakashanyira iro guta reAndalusian, iwe uchazoziva chaizvo kunyatso kukosha kwaro kune vagari varo Triana puppy, zita ravakabhabhatidza rakakurumbira naro Kristu weKupera. Vhiki Dzvene dzese hama dzake dzinomuburitsa kunze vachifora kubva kuimba yadzo yakakomberedzwa nemhepo inoshamisa.
Izvo hazvigone kutishamisa, saka, kuti pakati pengano dzeSeville pane akati wandei ane uyu mufananidzo seanopikisa. Imwe yeakanyanya kufarirwa ndeye iyo yatinoenda kukuudza iwe pazasi.
Iyo inotaurira kuti mukomana wechiGypsy anonzi chaizvo Mbwanana Ini ndaipfuura zambuko reBarcas zuva rega rega kubva kuTriana, kwaive kunharaunda yeguta, kusvika kuSeville. Mumwe wevanhu vakamuona achiita nzendo iyoyo akatanga kufungira izvozvo aizoenda kunoshanyira mukadzi wake chaiye. Ndokunge, aive nekubata panyama naye.
Iye Kristu weKupera, anozivikanwa se "Mbwanana"
Rimwe zuva, akamumirira padhuze nekutengesa kwaVela akamubaya kanomwe. Vanhu vanoverengeka vakauya kuchema kwemukomana uye vakatadza kunzvenga kurwiswa uku. Pakati pavo paive nemuvezi Francisco Ruiz Gijon, uyo pakupedzisira angave ari munyori wechimiro chaKristu weKupera.
Zvinonzi iye, akavhundutswa nekurwadziwa kwejaya iri, akafuridzirwa nechiso chake kuveza icho chaKristu ane mukurumbira. Nenzira, aive asiri kuzoshanyira mukadzi wemhondi, asi hanzvadzi yaive isina anoziva saka misangano yavo yaive yakavanzika.
Nhoroondo yeCalle Sierpes
Uyu mugwagwa wepakati ndeimwe yeakakurumbira muSeville, asi havazi vese vagari veguta vanoziva chikonzero chezita rayo, iro zvakare riri nekuda kwenyaya yeSeville. Vanodaro, kumashure muzana ramakore rechiXNUMX, mune yaidaidzwa panguva iyoyo Espalderos mugwagwa Vana vakatanga kutsakatika pasina chikonzero chiri pachena.
Ivo havana kunzwikwa kubva zvakare uye iyi mamiriro anoshamisa akakonzera kutya pakati pevagari venzvimbo iyi. Iye zvino regent weSeville, Alfonso de Cárdenas, ndisingazive zvekuita. Kusvikira musungwa azvipira kugadzirisa zvakavanzika mukutsinhana nerusununguko rwake.
Era Melchor de Quintana uye akange ari mutirongo nekuda kwekutora chikamu mukupandukira mambo. Regent akagamuchira uye ipapo murume akashurikidzwa akamutungamira kunzvimbo kwaive ne nyoka hombe yakareba mamita makumi maviri. Yakanga iine banga mukati mayo uye yakanga yakafa. Akanga ari Melchior pachake uyo akamutarisana naye ndokumuuraya.
Iyo nyoka kana nyoka yakaratidzirwa muCalle Espalderos kuti isimbise vagari vayo. Zvinonzi ivo vakauya kuzozviona kubva munzvimbo dzese dzeguta uye, kubvira ipapo, mugwagwa wakadaidzwa weSierpes.
Mukupedzisa, isu takuratidza ngano dzinozivikanwa kwazvo dzeSeville. Kune vamwe vakawanda vakaita se Kristu weSimba Guru, izvo zve Santa Librada kana iyo yeiyo Vasande Justa naRufina. Asi nyaya idzi dzichasiirwa imwe nguva. Kana iwe uri muguta, nakidzwa nazvo. Tinokusiya mune iyi link runyorwa nerwendo rwaunogona kuita kubva kuSeville kana iwe uine nguva yekuongorora zvakatenderedza, hauzombozvidemba!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Spain maguta » Sevilla » Ngano dzeSeville